ITALY VS IRELAND oo la dabooli doono garoonka ay caawa ku dheelayaan (Arag sababta) – Gool FM
ITALY VS IRELAND oo la dabooli doono garoonka ay caawa ku dheelayaan (Arag sababta)
Raage June 22, 2016
(Stade Pierre Mauroy ) 22 Juunyo 2016 – Kulanka goor dhow bilaabmi doona ee Talyaaniga iyo Republic of Ireland ee ka dhici doonta Lille ayaa garoonka la dabooli doonaa.
Warkan ayaa waxaa Twitter-ka ku xaqiijiyey FAI, iyadoo tayada oogada garoonka Stade Pierre Mauroy aad loo dhaliiley kaasoo la bedeli doono Jimcaha kaddib markii ay gaartey wax lagu sheegay “waxyeello aan la sixi karin.”
Waloow uusan haatan roob ka da’aynin magaalada Lille, misna waxaa lasoo sheegayaa inuu jawigu aad u xun yahay maalmihii yaraa ee ugu dambeeyay, sidaa darteed baana la gaarey go’aanka ah in garoonka la daboolo.
Waxaa laga cabsi qabaa inuu yimaado roob mahiigaan ah oo wata duufaanno iyo baraf-dhagax, waxaana sidoo kalela xaqiijiyey inay Talyaanigu ku dheeli doonaan funaanaddooda buluugga ah, buumaha iyo iskaalshooyinka cad, halka Ireland ay ku ciyaarayso funaanad cad iyo buumo iyo iskaalshooyin wada cagaaran.
DEG DEG: Cristiano Ronaldo oo taariikh cusub ka dhigay Euro....(Waa laacibkii ugu horeeyay....)
KA BOGO: 55-ka gool ee uu Lionel Messi taariikhda ugu sameeyay xulkiisa Argentina + SAWIRRO